Soo-saarista maaskarada qalliinka Shiinaha iyo Warshad | Tiknoolajiyada Caafimaadka ee Cadeysan ee Hebei
Badeecadani waxay qaadatay seddex lakab sifeyn. Nidaamyada wax soo saarka ugu muhiimsan waxaa ka mid ah dhalaalka la afuufayo, spunbond, hawo kulul ama irbad feer, iwm, kuwaas oo leh hawsha iska caabbinta dareerayaasha, shaandhaynta qaybaha iyo bakteeriyada. Aqoonsiyada oo dhameystiran, alaabada waa la damaanad qaaday, marada meltblown miiraha leh ee seddex lakab + heerka ilaalinta dharka aan tolneyn ayaa sarreeya, shaqada iyo iskuulku waa baxaan, had iyo jeer waardiye, qaab gaar ah xagaaga, iftiin iyo neefsasho, Wajihi wajiga, ma furmayo, iska caabin hoose , ma haayo neefta, dhegaha dhegaha ee laastikada ah ee fidsan, oo raaxo leh in la xidho oo dhagaha ha adkayn.
1. Heerka fasalka qalliinka caafimaadka, maro dhalaashay dhalada caafimaad.
2. Badeecadani waxay leedahay kahortag wanaagsan oo seddex lakab ah iyo waxqabad ilaalin ah, oo si wax ku ool ah uga hortageysa walxaha bakteeriyada.
3. Si wax ku ool ah looga hortago faafidda dhiigga, dheecaannada jirka iyo buufinta inta lagu jiro hawlgalka gulufka.
4. Shaashadda shaashadda lakabyada badan ayaa si hufan u kala shaandheyn karta lakabka lakabka oo waxay ku raaxeysan kartaa neefsashada si ka wanaagsan.
5. Saddex lakab oo duudduub ah oo aan dun lahayn, lakab dhalaalaya iyo maqaar-saaxiibtinimo dhar aan tolmo lahayn ayaa waxtar leh oo ammaan u ah daryeelka.
6. Caabbinta neefsashada oo hooseysa, sifeynta hawada sare ee waxtarka leh, laalaabantay si ay u sameysato meel neefsasho ah oo 360 ° ah, oo aan dhego lahayn.
7. Naqshadaynta wax ka beddelka wejiga ayaa ku habboon, naqshada wejiyo badan na waxay kordhisaa quruxda.
8. Naqshadeynta dhinaca isku dhejinta ee sanka caagga ah ee aan muuqan ayaa ka qurux badan!
Alaabtaan waxaa nadiifiyay macdanta 'ethylene oxide' waxayna ku habboon tahay shaqaalaha caafimaadka iyo shaqaalaha la xiriira, iyagoo xiran meelo ku yaal isbitaallada, iskuulada, qaybaha, xarumaha laga dukaameysto iyo meelaha caamka ah
Waxay ku habboon tahay ilaalinta aasaasiga ah ee shaqaalaha caafimaadka ama shaqaalaha la xiriira, iyo sidoo kale ka hortagga faafidda dhiigga, dheecaannada jirka iyo buufinta inta lagu jiro hawlgallada duullaanka. Heerka ilaalinta waa mid dhexdhexaad ah oo wuxuu leeyahay waxqabadka ilaalinta neefsashada qaarkood. Badanaa waxaa lagu xiraa jawi nadiif ah oo leh heer nadaafadeed oo ah 100,000 ama ka yar, ka shaqeynta qolka qalliinka, kalkaalinta bukaannada leh hawlgabkooda difaaca jirka oo hooseeya, iyo qabashada hawlo daloolin daloosha. Maaskarada qalliinka caafimaad waxay xannibayaan bakteeriyada badankeeda iyo fayrasyada qaarkood, waxay ka hortagi karaan shaqaalaha caafimaadka inay cudurka qaadaan, isla mar ahaantaana waxay ka hortagaan in si toos ah looga soo daayo jeermis dileyaasha ay qaadeen neefta shaqaalaha caafimaadka, taasoo khatar ku ah bukaanada qalliinka lagu sameynayo. Maaskarada qalliinka caafimaad waxay u baahan yihiin waxtarka kala-bixinta si ka badan 95% bakteeriyada. Maaskarada qalliinka ee la tuuri karo waa in sidoo kale la siiyaa bukaannada neefta ka shakiya si looga hortago halista infekshinka shaqaalaha kale ee isbitaalka loona yareeyo halista infekshinka iskutallaabta.
heerka: YY0469-2004 Heerka Filter: 99%
heerka amniga: 0469-2011 Maaskarada qalliinka caafimaadka magaca sheyga: Maaskarada qalliinka caafimaadka ee la tuuri karo
Hore: Maaskarada dhegaha lagu dhejiyo
Xiga: Dharka difaaca